रोचक छा’तीमा क’फ ज’मेको छ ? यस्तो छ घरेलु उ’पचार
नेपाल अनलाइन पत्रिका | काठमाडौं: अहिले स्वा’स्थ्यमा कुनै स’मस्या देखिए धेरैलाई चि’न्ता हुन्छ, को’रोना त होइन । तर, मौ’सम बद्लिने यो समयमा सामन्य स्वा’स्थ्य स’मस्या देखापर्छ ।
कसैलाई रु’घा लाग्ने, खो’की लाग्ने, ज्व’रो आउने, क’फ ज’म्ने, जो’र्नी दुख्ने आदि । कतिपय अव’स्थामा घ’रेलु उप’चारबाट पनि यस्ता स’मस्याहरुबाट छु’टकारा पाउन सकिन्छ । खासगरी खो’की लाग्ने क’फ ज’म्ने सम’स्यामा यी घ’रेलु उ’पचार प्रभावकारी हुनसक्छ ।
म’ह र कागती एक चम्चा अ’र्गानिक मह र २ चम्चा कागतीको रस मिसाएर पिउनुपर्छ । यसले घाँ’टीलाई आराम पुर्याँउछ । महमा एन्टीब्या’क्टेरियल र ए’न्टी फं’गल गु’ण पाइन्छ ।
त्यस्तै का’गतीमा भि’टामिन सीको भरपुर मात्रा पाइन्छ जसले घाँ’टीलाई तुरुन्त आराम पुर्याउँछ । मरिच मरिच केही पि’रो र स्वादमा तिख्खर हुन्छ । यो श्वासप्र’शवसको स’मस्या समाप्त गर्नको लागि आयुर्वेदमा चम’त्कारी औ’षधि मानिन्छ ।
यसले क’फलाई स’माप्त गरिदिन्छ । म’रिचमा पा’इपरलांगमाइन नामक र’सायनिक तत्व पाइन्छ र यसले हाम्रो श’रीरमा ए’न्जाइम बन्नबाट रोक्छ । श’रीरमा बन्ने एन्जा’इमले खो’की र यसको इन्फे’क्सनलाई बढाउँछ जुन क’फको कारण बन्छ । दैनिक एक कप पानीमा २० दाना जति म’रिच उ’माल्नुहोस् र फेरि त्यसमा मह मिसाएर पिउन सकिन्छ ।
तातो पानी कफ जमेको स्थितीमा हल्का तातो पानी पिउनुपर्छ । यसले छा’ती र घाँ’टीमा ज’मेको कफको मात्रालाई कम गर्छ । कागती पानी वा कागतीको चिया पिएर पनि आफूलाई हाइड्रेट राख्न सकिन्छ । नुनपानीले कुल्ला नुन पानीले कुल्ला गर्नाले घाँ’टीलाई राहत मिल्छ र घाँ’टीमा ज’मेको कफ सफा हुन्छ ।
यसले घाँ’टी सफा हुन्छ र घाँ’टीमा भएका सबै कि’टाणु पनि मर्छन् । बेसार ता’तो पानीमा एक च’म्चा बे’सार मिसाउनुपर्छ । बेसामा कु’रक्युमिन नामक एक तत्व पाइन्छ । जसमा धेरै नै शक्तिशाली एन्टीब्या’क्टेरियत गुण हुन्छ । यसले क’फलाई पा’तलो बनाउन मद्धत गर्छ ।
सन्तुलित आ’हार फि’ट रहनको लागि हामीले सबैभन्दा पहिले आफ्नो आ’हारमा ध्यान दिनुपर्छ । दै’निक जतिसक्यो ता’जा फल, सा’गपात एवं सन्तु’लित डा’इट भएको खाना खानुपर्छ ।
त्यसैले आफ्नो डा’इटमा कार्बो’हाइड्रेड पनि सामेल गराउनुपर्छ । फि’ट रहनको लागि बो’सोयुक्त आहार खानु हुँदैन । स’न्तुलित खाना खाने र व्या’याम गर्नाले हाम्रो श’रीर सन्तु’लित हुने गर्दछ । जसबाट हामीमा आत्मविश्वास बढाउने काममा पनि मद्दत मिल्छ ।
व्या’याम अनिवार्य फि’ट रहनको लागि स’न्तुलित आ’हार मात्रै होइन । व्या’याम पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । सन्तु’लित आ’हारपछि दैनिक व्या’याम, जस्तै- दौ’डने वा अन्य किसिमका शा’रीरिक कसर’तले हाम्रो श’रीरमा ऊ’र्जा प्राप्त हुन्छ । ह’प्तामा केही दिनमात्रै यस्ता व्या’याम गर्दा पनि धेरै फाइदा हुन्छ । का’र्डियो ए’क्सरसाइजले मु’टुलाई मजबुत बनाउन मद्दत गर्दछ । स्ट्रे’न्थ ट्रेनिङले मां’सपेशीहरुलाई मज’बुत बनाउने गर्दछ र स्ट्रे’चिङ एक्सर’साइजले श’रीरको लचि’लोपनामा सुधार गर्न मद्दत गर्दछ । र’क्त परिसञ्चरणको लागि पनि नियमित व्या’याम आवश्यक हुन्छ । यसले त’नाव कम गर्न पनि मद्दत गर्दछ ।
पर्याप्त नि’द्रा फि’ट रहनको लागि सन्तु’लित आ’हार र पर्याप्त व्या’यामका साथसाथै पर्याप्त नि’द्रा पनि आवश्यक हुन्छ । यदि नि’द्रा पुगेन भने मेटा’बोलिज्म, मूड, एका’ग्रता, याद’दाश्त, स्ट्रेस, हा’र्मोन, रो’ग प्रति’रोधक क्ष’मता र हृ’दयमा अ’सर पर्दछ । पर्याप्त नि’द्राले नै हाम्रो म’स्तिस्कलाई आ’राम दिन्छ र शरीरलाई पनि फिट राख्न मद्दत गर्दछ । त्यसैले दैनिक ७-८ घ’ण्टा अनिवार्य निद्रा पूरा गर्ने गर्नुपर्छ ।
अरु के-के गर्ने ? फि’ट रहनको लागि माथिका तीन कुराहरु महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसका अलावा निम्न कार्यहरुले पनि हाम्रो श’रीरलाई तन्दुरुस्त र स’न्तुलित बनाइराख्न मद्दत गर्दछ । हरेक दिन बिहान खाजाको रुपमा अनिवार्य पौ’ष्टिक आहार सामेल गर्ने। दिनभरीमा जतिसकिन्छ धेरै पानी पिउने । शरी’र फिट राख्नको लागि त’नावलाई ह’टाउने। आफूले नियमित खाने खानामा शुद्ध ते’ल प्रयोग गर्ने । नियमित रुपमा खेलकूदमा सहभागी हुने । दैनिक दूध पिउने । दैनिक बिहान हिँड्ने वा दौडने बानीको विकास गर्ने ।